अभिमत: सुकुम्बासीका छातीमा पड्किने बन्दुक
सुकुम्बासीका छातीमा पड्किने बन्दुक
ए सत्ताधारीहरू हो ! मलाई केही प्रश्नको उत्तर देऊ । के यस देशको युगान्तकारी परम ठेकेदार तिमी मात्र हौ ? के यहाँको जल, जंगल र जमिन तिम्रो बपौती हो ? के हावा र घाम पनि तिम्रै उपहार हुन् ? भन, एकरत्ति वरपर नगरेर भन, के प्रकृति तिम्रो बन्दी हो ? होइन, यस देशका वास्तविक मालिक र पहरेदार महान् जनता हुन् । जनता नै देश, इतिहास र युगका चालक शक्ति हुन् । तिमीहरू त आउने-जाने पाहुना मात्र हौ । जल, जंगल, जमिन, वायु र प्रकाश कुनै निजी सम्पत्ति र उपहार होइनन् । यी त मानवजातिलाई दिइएका प्रकृतिका उपहार हुन् । यसको संरक्षण, उपभोग र विनाशको अधिकार जनताकै हातमा हुन्छ । प्रकृति र प्राकृतिक सम्पदा कसैको इच्छित जेलमा कैद हुन्नन् । प्रकृति र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणविना मानवजाति र समुदायको जीवन सुरक्षित छैन । यो सिकाउनुपर्ने विषय होइन, जानेमानेकै कुरो हो ।
यही धर्तीमा जन्मी-हुर्केका धर्ती-पुत्रहरू किन यही धर्तीमा भूमिहीन, सुकुम्बासी हुनुपर्ने ? मान्छे त उही एउटै त हो नि, किन कोही कमारा-कमारी, हलिया, गोठाला, हरुवा-चरुवा हुनुपर्ने ? कसैका गगनचुम्बी महल ठडिने, कसैका ओत लाग्ने छाप्रा र झुप्रा पनि नहुने ? यो के हो ? बाढी-पहिरो, पुलिस-प्रशासन सबै-सबै तिनैलाई लाग्नुपर्ने ? कसको के बिगारेका थिए, के खाइदिएका थिए ती सुकुम्बासी जनताले ? किन सरकार गोली, लाठी र बुट भएर खनिनुपर्‍यो तिनैमाथि ? आफ्नै देशका जनतामाथि बर्बर बन्ने यो सरकार र पुलिस-प्रशासन किन चुप छ— हाम्रा सीमा मिचिँदा ? किन मूकदर्शक छ सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट ताण्डवनृत्य प्रस्तुत गरिँदा ? तिम्रा ती बहादुरी त्यता सोझिनुपर्दैन ? हाम्रो आकाशमाथि कुनै अनुमतिबिना कावा खाने भारतीय लडाकु सुपरसोनिक जहाजतिर तिम्रा आँखा किन पर्दैनन् अन्धा शासकहरू हो ! सरकारको कुर्सीमा बसेका लाचार छायाहरू ! किन चिन्ता र चासो छैन— मुस्ताङमा मस्तसँग षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेका 'प्रभुहरू' प्रति तिम्रो ? जनताले जवाफ मागेका छन् ।
आफ्नै महिला सुरक्षाकर्मी सुन्तली धामीमाथि सामूहिक बलात्कार गर्ने परपीडकलाई सख्त कानुनी कारबाही गर्नुको साटो, कारबाही-प्रक्रिया थाल्ने डिआइजी पार्वती थापामाथि पूर्वाग्रही ढंगले विभागीय कारबाही गर्ने तिम्रो नियत जनतालाई राम्ररी थाहा भयो । राम्ररी विचार गरौँ— सुन्तली तिमी-हाम्रै छोरी, बहिनी, बुहारी र दिदी हुनुपर्छ । पार्वती पनि तिमी-हाम्री परमशत्रु होइनन् होला । कानुनलाई धोती लगाउँदै जाने तिमीहरू कानुनकै हत्यारा साबित हुँदै छौ । कानुन र महिला अस्मिताका हत्याराहरू धेरै दिन टिक्न सक्नेछैनन् । यस देशमा कानुनी शासन, विधिको व्यवस्था र आचार-विचारको लोकतान्त्रिक पद्धति चलाउँछौँ भन्नेहरूबाटै महिला, सुकुम्बासी र गरिब जनतामाथि आक्रमण, हत्या, बलात्कार र ज्यादती भइरहेको छ । सुकुम्बासीलाई 'वन अतिक्रमणकारी, आक्रमणकारी र अतिवादी' भन्ने आरोप लगाइँदै छ । पहिले पुलिसमाथि गोली प्रहार र आक्रमण भएको झुटको खेती गरिँदै छ । त्यसलाई षड्यन्त्रको पूर्वसंकेतका रूपमा जनताले लिँदै छन् ।
शान्ति, संविधान, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रियताका विरोधमा लिप्त हुँदै गएका दल र सरकारबाट अब हुने हरेक घटना रहस्यात्मक लाग्नु कुनै अनौठो होइन । खबरदारी गर्दै छन् जनताहरू— यी चार सवाल हल नगरेको खण्डमा भविष्य अन्धकारमय र अनिष्टताले भरिनेछ । त्यो अन्धकार र अनिष्टताले ती दल र सरकारलाई नै पहिले गाँज्नेछन्, जसले नियतवश यथास्थिति र प्रतिगमनतिर यात्रा गर्दै छन् । एकपटक पुनः इतिहासको ऐना र हारका गहिरा खाटा हेर, पढ र सोच शासकहरू ! सुकुम्बासीका छातीमा पड्किएका ती बन्दुक कतै तिम्रै छातीमा नपड्कियून् । ती बन्दुकधारी तिनै सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, गरिब किसान र महिलाकै छोराछारी हुन्, तिम्रा खेलौना होइनन् । कैलालीको एउटा सानो झिल्कोले तिम्रो सारा सर्वस्व डढाउन सक्छ, होसियार, खबरदार !
(मगर माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हुन्)
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 6:56 PM